संगीतले ब्लड प्रेशर नियन्त्रण गर्छ, कसरी ? - Deshko News Deshko News संगीतले ब्लड प्रेशर नियन्त्रण गर्छ, कसरी ? - Deshko News
संगीतले ब्लड प्रेशर नियन्त्रण गर्छ, कसरी ?
काठमाडौं, २६ माघ
आजकल बदलिँदो जीवनशैलीका कारण महिलामा ब्लडप्रेशरको समस्या धेरै देखिन थालिसकेको छ । जसलाई महिलाहरु एक सामान्य कुरा मान्दछन् ।
तर यो केवल सामान्य होइन, ब्लडप्रेशरको समस्याले ज्यान पनि जान सक्छ । यसको लागि मानिसहरु विभिन्न प्रकारका औषधीहरुको प्रयोग गर्ने गर्दछन् । तर तपाईंलाई थाहा छ, म्युजिक सुन्दा ब्लडप्रेशरको लागि प्रयोग गरिएको औषधीको असर अझ बढ्ने गर्दछ ।
एक अनुसन्धानले यो तथ्यको खुलाशा गरेको हो । आउनुहोस् जानौं, कसरी गर्छ त म्युजिकले औषधीको असरमा मद्दत !
यदि तपाईंलाई हाई ब्लडप्रेशरको समस्या छ र क्लासिकल म्युजिक सुन्नुहुन्छ भने एन्टी हाइपरेन्टिसभ औषधीको असर बढेर जान्छ । साइन्टिफिक रिपोर्टस जर्नलमा प्रकाशित रिपोर्टमा भनिएको छ कि औषधी लिइसकेपछि म्युजिक सुन्दा हाई ब्लडप्रेशर धेरै हदसम्म नियन्त्रित हुने गर्दछ । स्टडी कोअर्डिनेटर वाइटर एनग्रेसिया वेलेन्टी भन्छिन्, म्युजिक सुन्दा मुटुको धड्कन सही हुने गर्दछ ।
एक अध्ययनमा हाइपरटेसनबाट पीडित बिरामीमाथि म्युजिकका असरलाई लिएर अनुसन्धान गरिएको थियो । जसमा पाइयो कि म्युजिक सुने लगत्तै औषधीको सेवन गर्दा एक घण्टाभित्र नै बिरामीको मुटुको चालमा धेरै सुधार आयो । अनुसन्धानकर्ताहरुले पनि म्युजिक सुन्दा बिरामीमा औषधीको असर प्रभाव राम्रो भएको पाए ।
यो अनुसन्धानपछि संगीत अब केवल मनोरञ्जन मात्र नभई स्वस्थ रहने साधन पनि हो । यसको लागि क्लासिकल अथवा आफूलाई आनन्द मिल्ने म्युजिक सुन्न सकिन्छ । (एजेन्सी)
मिस नेपाल २०२० को आवेदन खुला, यस्तो छ मापदण्ड
काठमाडौं, फागुन १३ मिस नेपाल २०२० को आवेदन खुला गरिएको छ । २०२० मे १५
सलमानलाई मार्न सुपारी लिएका कुख्यात गुण्डा नाइके पक्राउ
एजेन्सी बलिउड सुपरस्टार सलमान खानलाई मार्नको लागि सुपारी लिएका गुण्डा नाइके पक्राउ परेका छन ।
बलिउड अभिनेता सलमान भेट्न साइकलमा यात्रा
एजेन्सी, फागुन ३ यसपटक फिल्म फेयर मुम्बईमा नभई असमको राजधानी गुवाहाटीमा सुरु हुने भएको छ
लुट्न सके लुटको सफलतापछि पशुपतिको जता नि चोर सार्वजनिक (भिडियोसहित)
काठमाडौ, फागुन २ लोकगायक पशुपति शर्माको नयाँ नयाँ म्युजिक भिडियो सार्वजनिक भएको छ । ‘लुट्न
कोरोना पीडित थप ५२ जनाको मृत्यु
बेइजिङ, फागुन १४ चीनमा पछिल्लो समय ५२ जनाको नयाँ कोरोना जीवाणु ९भाइरस० कारण मृत्यु भएको
काठमाडौं, फागुन १४ देशभरिका क्याम्पस आजदेखि स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन स्ववियु पदाधिकारीविहीन भएका छन् । आज
विश्वविद्यालयको ऐनमा एकरुपता ल्याउने विधेयक सदनमा
काठमाडौं, फागुन १४ सरकारले विभिन्न विश्वविद्यालयको ऐनलाई एकरुपता कायम गर्ने ‘शिक्षासम्बन्धीको केही नेपाल ऐन संशोधन